Daboolka Foornada Fog, Siraaj Taleex Dibadeed ah Benz Cla, Toyota Coaster Head Laydhka - Rajo Sare
maxaad u doorataa rajo sare
Shirkadda Jiangsu High Hope International Group (Stock Code 600981) waxaa la aasaasay 1996. Waa mid ka mid ah shirkadaha ganacsiga ajaanibta ugu waaweyn Jiangsu, Shiinaha. Waxay sidoo kale ku jirtaa shirkadaha 500 ee Shiinaha ugu sarreeya, 500 ee ugu sarreysa shirkadaha shisheeye ee Shiinaha, iyo 500 ee ugu sarreeya shirkadaha adeegga Shiinaha. Sanadkii 2016, Kooxda Rajada Sare waxay ku guuleysatay dakhliga sanadlaha ah ee 31.983 bilyan RMB iyo wadarta qiimaha ganacsiga shisheeye ee 3.519 bilyan oo doolar. Waxay la sameysay xiriir ballaaran oo dhaqaale iyo ganacsi oo lala yeesho in ka badan 200 oo dal iyo gobollada adduunka.
Warshadda Detroit Jeep waxay wajaheysaa ku meel gaar ...
Stellantis NV waxay qorsheyneysaa inay si ku meel gaar ah shaqada uga joojiso shaqaalaha warshada Jeep ee Detroit inta lagu guda jiro Abriil iyo Maajo sababo la xiriira maqaayadaha yar yar ee loo yaqaan 'semiconductor chips', ayay shirkaddu xaqiijisay. ...
[Soo saaraha qaybaha baabuurta] Sida loo ...
Nalalka gawaarida waxaa loola jeedaa laambadaha gawaarida. Waa aalad loogu talagalay gawaarida inay iftiimiyaan wadada habeenkii, iyo sidoo kale qalab loogu talagalay kicinta calaamadaha gawaarida kala duwan. Nalalka gawaarida waa guud ...
Ma waxaad dooneysaa alaabooyin dheeri ah? Fadlan hadda nala soo xiriir!